ONN : Breaking News Abdii Illee mana murtiitti dhiheeysuuf qophiin xumuramee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVONN : Breaking News Abdii Illee mana murtiitti dhiheeysuuf qophiin xumuramee jira.
ONN:Breaking News Abdii Illee mana murtiitti dhiheeysuuf qophiin xumuramee jira.hagayya 27/2018
Dhugaan Ni Qallatti Malee Hincittu
Ummata irratti yakka raawwachuun kufaatii kufanii hin kaane hordofsiisa. Pirezidaantiin Naannoo Sumaalee, Abdii Mahaammad, toohannoo seeraa jala oolaniiru.
ABOn Nagaadha, jaalala, Bilisummaadha!!!
ABO nagaa barbaaduu har’a qofaa hin ibsine, rakkoon Oromoo fi Oromiyaa irra ga’aa jiru karaa nagaa akka dhumatuuf akka gaafatetti ture, amma illee harka nagaaf qabu isa hiixataa ba’e hin dachaafanne.
ABOn nagaadha, jaalala, Bilisummaadha. Haala adeemsa karaa nagaa amma deemaa jiru kana keessatti illee ABO dursee lola dhaabuun fedhummaa nagaaf qabu muldhisa. Gama warra mootummaa Itoophiyaatiin amma illee kun akka deebii hin arganne namuu ni hubata. Isa kana ABO ijoo dubbii kaleessa baase irratti hubachiifameera. Kanaafuu itti gaafatamtoonni ykn bulchitoonni Itoophiyaa har’aa akkuma afaan nagaa haasa’an kanaan labsii waraana dhaabuu illee hatattamaan labsuu qabu.
Kana ta’uu baannaan madaan keenya 1991/2 sun amma illee hin qoorre. Lama na hin suufan jette jaartiin jedhani, uummanni Oromoo amma illee deebii quubsaa eegaa jira. ABO ga’ee isaa ifaa fi kallattiin ba’achaa jiraachuu hojiin agarsiisaa jira. Araaraa buusuuf ga’een isaa ol aanaadha, labsii waraana dhaabuu darbees jila isaa biyya keessatti ergeera. Gama mootummaatiinamma illee qaawwaatu jiraa gara nagaatti as siqaa, afaan qobaan miti.